I-Streamland Media ibhengeza injongo yokufumana ishishini leposi leTechnicolor kwiTechnicolor | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Okufumaneka » IStreamland Media ibhengeza injongo yokufumana ishishini leposi leTechnicolor kwiTechnicolor
IStreamland Media, eyayisakuba yiNtloko yeNtloko yeMifanekiso, ibambe isivumelwano sokufumana ishishini leTech Technololor. Olu kongezo lwakha uthungelwano lwe-Streamland lwehlabathi lweetalente eziwonga amabhaso, ukuqinisa ukuzinikezela kwabo kubuchule bokuyila, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nentsebenziswano ebalulekileyo kwimveliso yezithuba. Ukufunyanwa, okuxhomekeke kwiimeko zokuvala ngokwesiko, kuxhaswa yiTrive Capital kunye neNtlanu yeCrown Capital kwaye kulindeleke ukuba ivalwe kwisiqingatha sokuqala sika-2021.
Ungene ngaphakathi los AngelesI-Streamland Media isebenza ngeyunithi ezihlanganisiweyo zeshishini kwihlabathi liphela, kubandakanya iinkokheli zeshishini Ivenkile yeFoto, iFomosa Group, iGhost VFX, iNtloko yeMifanekiso, iQela laseFama kunye neFinalé Post. La mashishini ahlukeneyo axhasa inqaku lefilimu, i-episodic, iindlela zokunxibelelana kunye nezikhulayo zokubonelela ngokubonelela ngenqanaba eliphezulu, izisombululo ezizizo emfanekisweni nasekugqityweni kwesandi, iziphumo ezibonakalayo kunye nentengiso. Ukongezwa kweTechnicolor Post kuya kuqinisa uluhlu lweetalente oludumileyo lweStreamland kwaye kwandise indlela eyahlukileyo yenkampani yokuhlangabezana neemfuno zabathengi kwiingingqi zehlabathi jikelele kubandakanya iUS, Canada, Yurophu nase UK.
Ishishini leTechnicolor Post liza kudityaniswa kwisikhundla esikhoyo seStreamland Media samashishini athathelwa ingqalelo kakhulu. Akuyi kubakho kuphazamiseka kweenkonzo zokuphumelela amabhaso kubaxhasi beTechnicolor Post ngeli xesha lokudityaniswa, kwaye bonke abasebenzi abazinikele kwiTechnicolor Post baya kuba yinxalenye yale ntengiselwano.
"Ukuzinikela kweqela lethu kubugcisa obugqwesileyo kunye nokufezekisa kwabo okugqwesileyo kuye kwavumela iStreamland Media ukuba yakhe le ntsapho ikhethekileyo yamashishini eevenkile," utshilo u-Bill Romeo, umphathi we-Streamland Media. “Kuyasivuyisa ukuba nobuchule obungaqhelekanga bamagcisa eTechnicolor Post azibandakanye nathi. Ukongeza ubuchwephesha beTechnicolor Post kunye neendawo zehlabathi eStreamland ziya kusivumela ukuba sihlangane nabo bonke abathengi bethu ukuya kuthi ga kwinqanaba elingaphezulu. Ndonwabile ngenxa yento ezayo. ”
Imodeli yaseStreamland isekwe kwifilosofi yexesha elide exabisa inkcubeko yayo eyahlukileyo kwaye ikhuthaza ukusebenzisana kuyo yonke indawo, utshilo uDavid Stinnett, iqabane lakhe eTrive Capital. “Le ibililitye lembombo lempumelelo yenkampani esiyixhasa ngokuzimisela. Siyavuya ukuqhubeka nokusebenzela uluntu emva kwemveliso kunye nomrhumo obanzi owenzelwe ngokukodwa ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kwihlabathi liphela. ”
UJeffrey Schaffer, umseki kunye nomlingane ophetheyo kwi-Crown Capital ezintlanu, uvakalisa uluvo. "Phantsi kolawulo lweqela elilawulayo leStreamland Media kunye nebhodi, sinombono wekamva eliqaqambileyo lokuvela kwemveliso emva kokugqitywa kwesi sivumelwano."
Imithombo yeendaba yaseStreamland
"Ukuthengiswa okucwangcisiweyo kweTechnicolor Post kuyinxalenye yombono wethu wexesha elide weeTechnicolor Production Services ukuba sigxile kwiVFX kunye nopopayi kushishino lokonwabisa, kunye neenkonzo zoyilo kunye neetekhnoloji kwishishini lezentengiso, elinika elona xabiso liphezulu kubaxumi bethu. Sizakuqhubekeka ukugxila kwezona ndawo zingundoqo ngokufunda amabhaso okuwonga amabhaso okudala iMill, MPC, Mnu X kunye neMikros Animation, utshilo uRichard Moat, uCEO weTechnicolor.
Malunga neMithombo yeendaba yaseStreamland
I-Streamland Media, eyayisakuba yi-Head Head Holdings LLC, isebenza ngokukhokela amashishini emveliso kwihlabathi liphela, kubandakanya neFoto Shop, iFomosa Group, iGhost VFX, iNtloko yeSithombe, iQela laseFama kunye neFinalé Post. La mashishini adibeneyo axhasa inqaku lefilimu, i-episodic, iindlela zokunxibelelana kunye nezikhulayo zokubonelela ngetalente ekumgangatho ophezulu, ubuchwephesha bobuchwephesha kunye nezisombululo ezenziwe emfanekisweni nasekugqityweni kwesandi, iziphumo ezibonakalayo kunye nentengiso. Ikomkhulu elikulo los AngelesI-Streamland Media ibonelela ngeendawo ezininzi kwihlabathi liphela e-US, Canada, Europe nase-UK ezijolise ekunikezeleni ngendlela eyodwa, yengingqi yokuhlangabezana neemfuno zabathengi.
I-Technicolor yinkokeli yehlabathi kwindalo kunye nokuhanjiswa okungenamthungo kwamava okuzonwabisa angaqhelekanga. Ngokudibanisa ubugcisa obukhokelayo kushishino kunye ne-world-class innovation, inkampani kunye nosapho lwee-studio zokuyila zinceda ababalisi beendaba bazise eyona mibono inomdla ebomini.
Previous: Inguqulelo yeTekhnoloji yongeza iMo-Sys StarTracker kuludwe lwayo kunye neshedyuli yoqeqesho
next: I-Semina yokuPhicotha ukuPhicotha ukuLungelelanisa iMfundo yoMculo ye-COVID kunye noDante ngexesha le-NAMM 2021